Inona no atao hoe Marketing Healthcare? | Martech Zone
Inona no atao hoe Marketing Healthcare?
Talata, Desambra 4, 2018 Zoma, Desambra 7, 2018 Ashley Walsh
Rehefa sendra lozam-pifamoivoizana ianao, nianjera na naharary karazana ratra mafy hafa, ny zavatra farany mety eritreretinao dia ny efitrano fandraisam-bahiny tianao hitsidika azy mifototra amin'ny gazety ara-barotra, bileta na mailaka farany hitanao . Ny fantsom-pivarotana dia tena tsy mihatra mandritra ny fotoana maika
Na izany aza, ny marketing ara-pahasalamana dia mihoatra ny marketing sampana vonjy taitra sy tobim-pitsaboana lehibe. Ny hopitaly, ny tobim-pitsaboana maika, ary ny tobim-pahasalamana dia tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana serivisy isan-karazany izay miverina amin'ny lalan'ny varotra.
Raha ny marketing ara-pahasalamana dia mitovy amin'ny karazana marketing nentim-paharazana, andao jerena ny sasany amin'ireo lafiny tsy manam-paharoa amin'ny marketing ao amin'ity orinasa ity:
Hetsika sy fandaharana amin'ny fiaraha-monina
Data vaovao avy amin'ny Serivisy mpamatsy vola an'i Moody mampiseho fihenam-bidy lehibe amin'ny fikorianan'ny vola amin'ny hopitaly. Ny tatitra nataon'i Moody dia nisy fihenan'ny 9.5 isan-jato tamin'ny 2016 ka hatramin'ny 8.1 isan-jato tamin'ny taona 2017 - fihenam-bidy mbola tsy nisy toa izany izay hita farany nandritra ny krizy ara-bola tamin'ny 2008. Ny isa toa an'ity dia tsy miorina tsara amin'ny fitoniana ara-bola maharitra, ka izany no mahatonga ny mpitantana hopitaly maro mitady loharanom-bola fanampiny.
Ny hopitaly sasany izao dia mahazo vola amin'ny programa momba ny fahasalamana sy hetsika manokana amin'ny ezaka atao fatiantoka offset amin'ny departemanta hafa. Ny programa momba ny fahasalamana dia tsy vitan'ny hoe misoroka ny ratra sy ny aretina ihany, fa araka ny filazan'ny Medical Fitness Association, dia mahatratra ihany koa ny marim-pianianana avo lenta 30 isan-jato. Ny hetsika manokana dia mety ho loharanom-bola lehibe koa. Ao amin'ny 2017 fotsiny, hopitalin'ny Miracle Network an'ny ankizy tafakatra mihoatra ny 38 tapitrisa dolara amin'ny alàlan'ny Dance Marathon isan-taona an'ny tambajotra.
Toy ny raharaham-barotra rehetra, ny laza dia zava-dehibe amin'ny fisarihana tsy ny marary ihany fa ny talenta ambony indrindra koa. Ireo tranonkala mpandinika ny mpanjifa, toa ny Yelp, dia nahazo laza tamin'ny tapaky ny taona 2000 ary manintona izao mpampiasa an-tapitrisany isan'andro. Healthgrades, tranokala fanaraha-maso momba ny fahasalamana, dia efa nandritra ny 20 taona mahery izay manampy ny marary hahita mpamatsy sy hopitaly avo lenta.
Manoloana ny lalàna momba ny fikarakarana mora vidy manome ny marary fanaraha-maso bebe kokoa amin'ny mpamatsy safidy azy ireo, nitombo be ny andraikitry ny mpivarotra ara-pahasalamana amin'ny marketing ny marika. Ny fomba iray haingana ahafahan'ireo mpivarotra ara-pahasalamana mametraka ny hevitry ny marary amin'ny fampiasana tsara dia ny fampiasana rindrambaiko fitantanana laza hamantatra ny lesoka ao amin'ny tambajotran'izy ireo. Izany dia manamora ny fanitsiana ny fitarainana haingana araka izay tratra, ary koa ny fampitomboana ny fanehoan-kevitra tsara avy amin'ny marary. Raha ahiahy ny famerenana ratsy dia ampiasao ny herin'ny fanadihadiana amin'ny fahafaham-po ny marary hamantatra aloha ny olana, alohan'ny hamindrana azy ireo any amin'ireo tranokalam-bahoaka toy ny Healthgrades.
Teknolojia momba ny fahasalamana farany
Fantatray fa maniry ny teknolojia farany indrindra ny mpanjifa. Mety ho marina kokoa izany raha resaka fahasalamana. Mety ho OK ny mpanjifa amin'ny fananana iPhone izay taranaka vitsivitsy manana efijery vaky, saingy tsy ho faly izy ireo raha toa ka natao tamin'ny scanner MRI amin'ny fanjakana mitovy amin'izany ny scann'ny ati-dohany.
Ho valin'izany, ny mpivarotra ara-pahasalamana dia nametraka ny mason'izy ireo amin'ny fandrosoana ara-teknolojia amin'ny marketing ho toy ny fomba famoronana fahasamihafana eo amin'ny tsena.
Azo inoana fa mbola hanohy hahita fandidiana ampiasana robot sy fandaharam-pianarana fanampiny AI isika amin'ny taona ho avy. Ohatra, fianarana notarihin'ny Stanford University School of Medicine dia nahita fitomboan'ny fandidiana voa voaampy amin'ny robot avy amin'ny 1.5 isan-jato natao tamin'ny 2003 ka hatramin'ny 27 isan-jato tamin'ny 2015.
Rehefa mitombo ny fangatahana ny fandrosoana farany amin'ny teknolojia, ny mpivarotra ara-pahasalamana dia miara-miasa akaiky amin'ireo lehiben'ny departemanta hamantatra ireo mpanavaka vaovao sy hafatra fototra isam-bolana sy isan-taona.
raha marketing ara-pahasalamana dia mitovy amin'ny endrika marketing nentin-drazana, mitondra ny fomba fijeriny manokana eo ambony latabatra izy io. Amin'ny alàlan'ny fampiasàna programa sy hetsika, mifantoka amin'ny fitantanana laza ary manome fanazavana momba ny haitao farany, ny marketing ara-pahasalamana dia manorina amin'ny fomba mahomby manodidina ny serivisy marobe.
Tags: marketing ara-pahasalamanatwitter momba ny fahasalamanamarketing amin'ny twittertobim-pahasalamana-barotrafitantanana lazahevitrainona ny marketing amin'ny fahasalamana
Ashley no VP an'ny Marketing ao Formstack, vahaolana amin'ny rindrambaiko fisamborana endrika any Indianapolis. Talohan'ny Formstack, nandany 8 taona i Ashley tao amin'ny lisitra Angie's List amin'ny sehatry ny marketing, ny vokatra ary ny asany.
GroupHigh: Mikaroha ary araho ny fanentanana ny bilaoginao